Budata vidiyo Twitter ➵ Budata vidiyo, gifs, foto tweet, foto profaịlụ, ọkọlọtọ nkụnye eji isi mee, thumbnails, ndepụta okwu, palettes agba, mkpado site na Twitter.
Budata vidiyo Twitter
❝Budata twitter vidiyo & GIF si tweets❞
➶ Budata vidiyo, gifs, foto tweet, foto profaịlụ, ọkọlọtọ nkụnye eji isi mee, thumbnails, ndepụta okwu, palettes agba, mkpado site na Twitter.
Ihe ntanetị vidiyo Twitter bụ ngwa ntanetị iji budata vidiyo twitter & GIF nke agbakwunyere na tweets. Zọpụta vidiyo na GIF ọ bụla na Twitter.
Twitter Video Downloader-enye gị ohere download vidiyo si na twitter ma ọ bụ chekwaa gifs si twitter ozugbo gị PC, mbadamba ma ọ bụ gam akporo ekwentị. ➥ Wụnye ugbu a
Etu esi ebudata vidiyo site na Twitter
Na-eche banyere otu esi echekwa vidiyo twitter na ntanetị wee budata GIF si twitter? Soro usoro atọ a dị mfe na nbudata obi ụtọ!
Mgbe ịbanye na akaụntụ twitter gị, pịa akara ala adaala ugbu a n'akụkụ aka nri dị elu nke vidiyo ịchọrọ ibudata ma họrọ Detuo njikọ njikọ tweet.
Mgbe e depụtaghachiri tweet url, pịa nri gị ka ị pịa URL ebe a na igbe ederede dị n'elu wee pịa igodo.
Ihe nbudata vidiyo nke Twitter anyị ga-ewepu njikọ vidiyo vidiyo dị elu, ma ị nwere ike ịhọrọ ibudata nke ọ bụla ị chọrọ.
Etu esi ebudata vidiyo Twitter na ndọtị Chrome na mgbakwunye Firefox
🧐 Oge ụfọdụ anyị na-ahụ ụfọdụ vidiyo dị oke egwu na Twitter na anyị enweghị ike iguzogide nbudata. Ichekwa onyonyo ahụ abụghị nsogbu. Maka vidiyo, agbanyeghị, ịnwere ike ibudata nbudata vidiyo nke twitter. Ngwaọrụ ahụ na - ahapụ gị ibudata ọba akwụkwọ mgbasa ozi nke akaụntụ. Soro nkuzi na-esote iji jiri nbudata vidiyo vidiyo kacha mma iji chekwaa vidiyo na GIF si Twitter. Ka a pụọ!
Mepee ebe nrụọrụ weebụ Twitter.
Kpọnye vidiyo na Twitter.
Mepee nbudata vidiyo vidiyo Chrome / Firefox ➥ Wụnye ugbu a
Mgbe ị mepee ngwá ọrụ a, a ga-egbu otu koodu na taabụ dị ugbu a. Koodu a bụ ọrụ maka nyochaa json koodu ma chọta id nke tweet ugbu a na-egosi na ihuenyo. A na-eleghara Tweets na-apụtaghị na igbe ihuenyo.
Mgbe ịchọta video id, ngwá ọrụ ahụ na-aga n'ihu izipu arịrịọ na Twitter iji nweta data json. Igodo nbudata ahụ ga-egosi n'okpuru tweet ọ bụla na n'ime windo ngwaọrụ.
Ihe ị nwere ike ibudata na tweet ọ bụla gụnyere vidiyo, gifs, onyonyo ọ bụla na tweet, ndepụta okwu nwere ike iwepu. You nwere ike ịlele ma buo ibu avatar na ọkọlọtọ nwere ogo kachasi elu. Detuo palettes na mkpado dị mfe na tweets.
Mara: Ngwá ọrụ a na-akwado ibudata faịlụ ndị Twitter kwadoro. Mgbatị a anaghị enye ohere ịnweta weebụsaịtị ọ bụla, yabụ ndị ọrụ enweghị ike ibudata vidiyo site na tweets agbakwunyere na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Gini mere iji jiri nbudata vidiyo nke Twitter?
Ọ bụrụ na ewepụrụ vidiyo ahụ na Twitter, ị ga-enwe ike ile ya.
All ebudatara videos nwere ike zigara gị ama ịkọrọ mfe.
A na-elele vidiyo ọ bụla ibudatara na-anọghị n'ịntanetị.
Iji lelee vidiyo ahụ n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụrụ na ọ dị ogologo ma ịnweghị oge zuru ezu.
Nwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ na-adịghị n'ịntanetị maka mgbe ị na-eme njem.
☀ Budata Twitter vidiyo na ntinye.
☀ Gbanwee vidiyo Twitter na mp4.
☀ Budata Ultra HD 1440p, Full HD 1080p, HD 720p vidiyo si na Twitter.
☀ Budata Twitter gif.
☀ Ihe nbudata vidiyo nke onwe nke Twitter.
☀ Budata mgbasa ozi Twitter.
☀ Budata onyonyo izizi na Twitter.
☀ Ihe nlere foto profaịlụ Twitter.
☀ Ihe nbudata ihe ngosi nke Twitter.
☀ Budata ederede ederede Twitter.
☀ Budata Twitter thumbnails.
☀ Nnukwu ibudata ihe oyiyi Twitter.
☀ Budata Twitter vidiyo.
☀ Nbudata ihe ntanetị Twitter.
☀ Gbanwee vidiyo Twitter ka ọ bụrụ mp3.
☀ Download vidiyo si na ozi Twitter.
☀ Video vidiyo Twitter ka ihe ntụgharị.
☀ Budata tweets site na hashtag.
Social Network Twitter bụ otu n'ime weebụsaịtị ndị kachasị ewu ewu na ụwa. Ezubere saịtị ahụ maka mgbanwe ozi ọha na eze site na iji ntanetị, ngwa ngwa izipu ozi ma ọ bụ mmemme nke ndị ahịa nke atọ maka ndị ọrụ Internetntanetị ọ bụla. Otu n'ime ọdịnaya ndị ọrụ na-ebipụta na vidiyo Twitter bụ otu n'ime ihe kachasị ewu ewu.
Ihe Ntinye vidiyo nke Twitter
Ihe nbudata vidiyo nke Twitter bụ ngwa weebụ n'ịntanetị iji budata vidiyo twitter na GIF na kọmputa gị ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka ozugbo.
Twitter gif nbudata
Budata gifs na Twitter. Zọpụta dị ka vidiyo.
Ihe nbudata ederede Twitter
Wepu ma budata ndepụta okwu na Twitter.
Ngwaọrụ a na - ahapụ gị ibudata vidiyo na Twitter na mkpebi atọ, SD, HD, na UHD (ma ọ bụrụ na nhọrọ ahụ dị).
Budata vidio nkeonwe nkeonwe
Nwere ike ibudata vidiyo ma ọ bụ ihe oyiyi ọ bụla na twitter ị nwere ike ịlele, gụnyere ọdịnaya nkeonwe.
A na-amịpụta vidio niile ozugbo na sava CDN Twitter, na-eme ka ngwá ọrụ a dị mma.
Ihe ntanetị vidiyo Twitter na-arụ ọrụ nke ọma na Google Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla.
Chọta Ajụjụ na Azịza Gị Ebe a - Olee otu esi echekwa vidiyo Twitter?
+ Gịnị bụ Twitter Video Downloader?
Twitter video Downloader bụ a free iji ngwá ọrụ nwere ike inyere gị aka onwe download ọ bụla vidiyo si na Twitter maka offline playback.
+ Olee otu esi echekwa GIF si twitter na iPhone?
Iji chekwaa gif site na twitter na iPhone, biko biko soro usoro ndị a. Gaa na twitter ngwa site na iphone gị wee chọta GIF ka ịchọrọ ma chekwaa ya, jiri nwayọ Kpatụ ma jide GIF nke ịchọrọ ịchekwa, pịa chekwaa n'ọbá akwụkwọ, nwee ọ Gụ faịlụ GIF gị.
+ Nbudata nbudata Twitter ọ na-echekwa vidiyo ebudatara ma ọ bụ debe otu vidiyo?
Anyị anaghị echekwa vidiyo. Anyi achoghi kwa idebe vidio ndi ebudatara. A na-akwado vidiyo niile na sava Twitter. Ọzọkwa, anyị anaghị esochi akụkọ ntaneti nke ndị ọrụ anyị.
+ Kedu ka m ga - esi budata vidiyo nkeonwe na Twitter?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ibudata vidiyo nzuzo na Twitter, mgbe ahụ ihe ị ga - eme bụ ịmara URL nke Tweet ahụ. E nwere ụzọ dị iche iche ibudata vidiyo nke Twitter maka akaụntụ nkeonwe. N'ime ha, otu ụzọ bụ ịmata URL nke akaụntụ Twitter nkeonwe site na ịmepụta akaụntụ Twitter ma soro onye ịchọrọ ịma URL nke tweets ha. Mgbe nnabata gị nabatara gị ma ọ bụrụ na onye ahụ akwadoro arịrịọ ọbụbụenyi gị, ị ga-enwe ike ịhụ tweets ha niile. Iji budata vidiyo ịkwesịrị ịwụnye ndọtị maka Chrome ma ọ bụ Firefox. ➥ Wụnye ugbu a
+ Kedu usoro nke ebudatara vidiyo Twitter?
Dabere na njirimara dị nke vidio Twitter, ihe nbudata vidiyo Twitter anyị wepụtara 1440p, 1080p, HD mma na njikọ vidiyo vidiyo SD. Nwere ike ịhọrọ ibudata ọ bụla ị chọrọ. Ma, n’ọnọdụ ụfọdụ, ogo vidio adịghị mma ma ọ bụ naanị vidiyo dịnụ nwere nke SD.
+ Etu esi ebudata vidiyo Twitter na ekwentị gam akporo m?
Ihe nbudata vidiyo nke Twitter adịlarị na Firefox maka ekwentị gam akporo. ➥ Wụnye ugbu a
+ Ole vidiyo m nwere ike ibudata na Twitter?
Ihe nbudata vidiyo nke Twitter enweghị oke, kwa elekere, ụbọchị ma ọ bụ ndị ọzọ. Nwere ike ibudata site na Twitter dị ka ọtụtụ vidiyo na foto dịka ịchọrọ.
+ Enwere m ike ibudata vidiyo ma ọ bụrụ na anaghị m edebanye aha na Twitter?
Emela. Needkwesịrị ịdebanye aha twitter iji nwee ike ịbanye ma lelee vidiyo.
Njikọ nke e depụtaghachiri nwere ike ịbụ na-ezighi ezi ma ọ bụ njikọ mebiri emebi.
Ọ bụrụ na ị nọ na ekwentị mkpanaaka, pịa ma jide vidiyo ruo mgbe nhọrọ nbudata ga-apụta. Na desktọọpụ, pịa akanri na vidiyo ma họrọ Chekwa njikọ dị ka nhọrọ.
Budata Twitter Videos Online Full HD
Ihe Ntinye vidiyo nke Twitter na-enyere gị aka ịmepụta njikọ kpọmkwem maka vidiyo twitter kachasị amasị gị ma chekwaa ha maka nlele na ịkekọrịta na-anọghị n'ịntanetị.
Ihe nbudata vidiyo nke Twitter bụ ezigbo ngwaọrụ ị nwere ike iji ntanetị iji budata vidiyo na GIF si Twitter na kọmputa m.
Twitter Video Downloader bụ kpam kpam mma na Downloads videos kpọmkwem site Twitter CDN sava.
Ngwaọrụ a na-arụ ọrụ maka ngwaọrụ niile, gụnyere kọmputa desktọọpụ, smartphones, na mbadamba.
Ngwaọrụ a na - ahapụ gị ibudata vidiyo (dị ka MP4s) na GIF si Twitter.
Download Twitter Videos bụ ngwá ọrụ na onye ọrụ-enyi na enyi interface.
A ngwa ngwa na pụrụ ịdabere na ụzọ ibudata mkpachị.
Nke a bụ ngwa ngwa-ngwa ngwa ma dabere na-enye gị ohere ịchekwa vidiyo site na Twitter na ọkụ.
Mgbakwunye dị egwu maka ibudata vidiyo mgbasa ozi twitter.
Nke a bụ nnukwu ihe ọzọ na ngwa tweet2gif.
Twitter Video Downloader bot - Ngwongwo kachasị n'ịntanetị kachasị mma iji budata ma chekwaa vidiyo na GIF si Twitter 2022